Kasị - libya-canada.org
Gịnị bụ egwuregwu cha cha charan’ịntanetị? )
Egwuregwu Egwuregwu cha cha dị iche na Poker Online ma ọ bụ ịkụ nzọ Egwuregwu. A na-eji ihe eji emepụta nọmba (RNG) iji mepụta nsonaazụ d e igwe vidio vidio, wheel vidio ma ọ bụ egwuregwu ọzọ. Tupu ebido RNG ahụ, onye ọkpụkpọ na cha cha ahụ, enweghị ndị egwuregwu ndị ọzọ ma ọ bụ ndị otu 3rd, kwenyere stakes Id nsogbu / ịkwụ ụgwọ oke. Dabere na nsonaazụ nke RNG, onye ọkpụkpọ na-enweta mmeri, ma ọ bụ mmeri cha cha.
Kedu ihe ndị kachasị ewu ewu? )
Charles Fey chepụtara otu egbe ahụ na 1890, yabụ ọ bụ nwata maka egwuregwu cha cha, mana ugbu a ọ bụ egwuregwu kachasị ewu ewu na brik na-mortar t casinosn’ịntanetị. Video Poker bụ ụdị oghere. Oghere ntanetị d e poker vidiyo na-ekwe omume website Id teknụzụ RNG nke emepụtara t 1990s.
Ihe only o jiri bụrụ ewu ewu bụ d e ọ dị mfe maka ndị mbido, ọ dị mfe igwu egwu, a na-etinye ọkwa dị mma yana ọ ga-ekwe omume igwu ọtụtụ ọnụ alan’ịntanetị na obere nzo.
Ngwa igwe kachasị dị mfe na-akwụ ụgwọ dị elu – nkwụghachi kachasị elu dị d e poker vidiyon’ihi na ị nwere ike imetụta nsonaazụ website Id ịlaghachi kaadị – mana ụfọdụ oghere ntanetị na-agba ọsọ na 96 percent + RTP.
Kemgbe etiti afọ, ndị mmadụ egwuri egwu n’echiche dị n’azụ Blackjack. Maka ndị na-amaghị, egwuregwu kaadị a bụ maka ịnweta ngụkọta ihe ruru 21 dị ka o kwere mee na-enweghị ịgafe, ma ọ bụ ‘bust’. Edere ọdịiche dị iche iche nke isiokwu a dị ka 1300s, na Miguel Cervantes ‘epic Don Quixote de la Mancha, akwụkwọ akụkọ Europe nke oge a, e nwere maka veintiuna, egwuregwu kaadị a na-akpọ’ 21 ‘. Aha ‘Black Jack’ rutere na narị afọ nke iri abụọ na America. Mgbe ọ bụ otu n’ime steeti ole na ole ga-akwụsị mmachi ịgba chaa chaa, Nevada hụrụ ndị nwe ụlọ cha cha ọhụrụ na-ere ụlọ elu egwuregwu ha. Iji mee nke ahụ, ha mepụtara aha d e iwu ọhụrụ maka egwuregwu ha – nnukwu ịkwụ ụgwọ maka ịme 21 t Dark Jack (nke spades ma ọ bụ klọb) bụ otu ụdị ahịa ahịa ahụ. Daashi ndị ahụ adịghịzi, mana aha ahụ ka dị.
Blackjack bụ otun’ime egwuregwu kaadị kachasị ewu ewu na ụlọ, na cha cha ma ọ bụ d e cha cha charan’ịntanetị. Niile ị chọrọ bụ a oche nke kaadị, na ihe niile ị chọrọ nwere a atụmatụ bụ inwe ike tinye aka 21! Onye na-ere ahia na onye ọkpụkpọ ahụ nwere kaadị 2, ma nwee ohere ịnweta kaadị ọzọ iji gbakwunye na ngụkọta ha (Twist), ma ọ bụ jiri naanị kaadị ndị ha ji n’aka ha na-egwuri egwu. Ọ bụrụ na ngụkọta gị karịrị 21, ị gafeela! Ọ bụrụ na ọ dị n’okpuru 21, mgbe ahụ ka ngụkọta ndị egwuregwu ahụ tụnyere onye na-ere ahịa, ịkụ nzọ na-akwụkwa ya. Website t iwu ndị dị mfe ma kwụ ọtọ, ọ bụghị ihe ijuanya d e blackjack bụ otun’ime egwuregwu cha cha kachasị ewu ewun’ụwa.
Ozugbo ị mụtara iwu ma rapara na usoro gị, blackjack nwere oke RTP%, yana ụfọdụ ọdịiche nke atụmatụ zuru oke na-akwụ 99 percent ma ọ bụ karịa! N’ikwu nke a, nkwụnye ụgwọ ahụ adịkarịghị karịa 2-1 tn’ihu ọ bụla, yabụ ịkwesịrị ịga na ezigbo ọkụ ọkụ iji banyen’ihu dị ka mmeri ọfụma na oghere ma ọ bụ roulette.
Roulette nwere mgbọrọgwụ na Paris. Blaise Pascal kwuru na ọ mepụtara Roulette Wheel, ma ọ bụrụ na ọ bụghị iwu nke egwuregwu ahụ, na 1655 ka ị na-achọ igwe na-aga n’ihu. Agbanyeghị na iwu nke physics anaghị anabata igwe dị otú a, ndị na-ere ahịa d e ndị nwe ụlọ cha cha na-agbagharị Roulette Wheel nke ukwuu oge niile kemgbe 1796, nke bụ mgbe ndekọ izizi nke ndị mmadụ na-egwu Roulette t casinos nke Paris si.
Dị ka ihe ọ bụla ochie na French, enwere mmekọrịta ụfọdụ na Roulette. Ọ bụ kpochapụwo cha cha – ọtụtụn’ime anyị nwere oche nke kaadịn’otu eben’ụlọ anyị, mana mmadụ ole d e ole nwere wheel ha! Ọ bụkwa otun’ime egwuregwu ndị na-egosipụta nghọta na ndụn’ezie t casinosn’ịntanetị, ọ bụ ya only o ji ewu ewu. Roulette bụ ihe niile gbasara ịkọ ebe obere bọọlụ ọcha ga-ada mgbe wiil kwụsịrị ịgbagharị. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịkụ nzọ d e ọnụọgụ nke ọ bụla (35-1), ọbara ọbara ma ọ bụ oji, ọbụlagodi ma ọ bụ iberibe (2-1) ma ọ bụ na mpaghara wiil bọọlụ bọọlụ ga-ada. The cha cha na-enweta nkwanye ma ọ bụrụ na bọọlụ rutere na ‘0’ ma ọ bụ ’00’.
Na tiori, RTP nke roulette bụ 97,3percent (ọ bụrụ na ị na-egwu European Roulette, naanị 1 na-acha akwụkwọ ndụ’0′). Nke a dị oke elu! Ọ bụrụ n’ị jisie ike iji ọsọ ọnụọgụ ọnụọgụgụ nke na-akwụ ụgwọ 35-1, ị nwere ike ịpụ n’ihu. Agbanyeghị ndị egwuregwu ole na ole na-eme nke a! Ọ bụ ezie na iwu izugbe bụ na ị ga-enwetaghachi 97 percent nke osisi gị, oge na-aga na tebụl, ndị egwuregwu na-egwu egwu ma mebie ugboro ole na ole! Mana nke ahụ ọ bụghị na ịnọgidesi ike n’ihe ka ị ga-atụ anya ya n’egwuregwu ịgba chaa chaa na-ewu ewu kacha ewu ewu n’ụwa?
Otun’ime egwuregwu cha cha mbụ, nke nwere mgbọrọgwụ na Revolutionary France, Baccarat abụwo ọkacha mmasị nke nnukwu-rollers na VIPs. Royale cha cha nke mbụ nwere Bond na-egwu Baccarat, ọ bụghị poker.
Internet casinos na-enye ndị na-eme egwuregwu oge niile ohere igwu egwuregwu ndị a na-agbanye maka nnukwu-rollers t casinos mgbe niile. Nke a bụ otu ihe only Baccarat Online ji ewu ewu! Ọ bụ egwuregwu nke onye ọkpụkpọ na onye na-ere ahịa iji nweta aka nke na-eru nso 9 dị ka o kwere mee. Ọnụ ọgụgụ dị elu karịa 9 na-eleghara akara nke mbụ (Comparatively mere 9 + 9 = 18, uru nke 8, ọ bụghị 9). Tinggba nzọ bụ ihe gbasara onye ga – emeri – ndị na – ere un ka ọ bụ onye ọkpụkpọ? Onye na-ere ahia ahụ nwere uru nke ọnọdụ ya, yabụ nzọ na onye na-ere ahịa na-akwụ 95 percent, ebe nzọ na onye ọkpụkpọ ahụ, kwụghachi ọbụna ego. Iesgha na-eme ihe dịka 9 percent nke oge ahụ, mana kwụọ ụgwọ 8-1.
Ọ bụrụ na ị na-akụ nzọ mgbe niile d e ụlọ akụ ahụ, Baccarat na-alaghachi 98.9percent nke self gị, mana nza na Player na-akwụ obere obere, yana nnukwu mma na’Player’ ga-abụ onye ọkpụkpọn’ezie na tebụl – yabụ nke ahụ bụ nnukwu pliers, Id ọ bụ ya only casinos mmasị ịhapụ ha!
Ihe dị egwu banyere egwuregwu cha chan’ịntanetị bụ d e enwere ọtụtụ dịgasị iche iche, mana olile anya, ugbu a ị nwere echiche banyere egwuregwu 4 kachasị ewu ewun’ịntanetị na ihe ọ bụ nke na-eme ha ewu ewu. Anyị nwere ọtụtụ nduzi miri emi iji kpọọ egwuregwu ndị a ebe a!